သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေအကြားမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ဘာကြောင့်ရေရှည်မခံသလဲ - YOYARLAY Digital Media and News
နေ့စဉ်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အချိန်တွေမှာ မိသားစုနဲ့နေရတာထက် လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ အပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူ ကုန်ဆုံးရတဲ့ အချိန်က ပိုများပါတယ်။ ဒီလိုနေရတဲ့အချိန်တွေမှာ အပေါင်းအသင်းအချင်းချင်းကြား (ကလေးအရွယ်မဟုတ်ပါဘဲ အရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့သူတွေဆီမှာတောင်) ‘သူကဟိုလူ့ကိုတော့ပိုခင်တယ် ငါ့ကိုတော့သိပ်မခင်ဘူး ဟိုလူ့ကိုတော့အရေးပေးတယ် ငါ့ကိုတော့ပစ်ထားတယ်’ အစရှိတဲ့ အတွေးတွေက ရံဖန်ရံခါ ဝင်ရောက်လာတတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်များပါလိမ့်?
သူတို့နဲ့ကိုယ့်အကြားကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးက ဘာကြောင့် မခိုင်မြဲသလဲဆိုတာ တွေးမိသလား? ဒါမျိုးအတွေးဝင်နေပြီဆိုရင်တော့ အောက်ကအချက်လေးတွေထဲက တစ်ခုခုနဲ့ကိုယ်က ဆက်နွယ်နေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ….ကြည့်ကြရအောင်။
၁။ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုပဲ ရှေ့တန်းတင်လေ့ရှိလား
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ဟိုသွားမယ် ဒါသွားစားမယ်ဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်သွားချင် ကိုယ်စားချင်တဲ့ နေရာကိုပဲ မရမကသွားဖို့ ဦးတည်နေမိလား? ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆန်းစစ်ကြည့်ဖို့လိုနေပါပြီ။ လူတိုင်းကကိုယ့်ဆန္ဒကိုပဲရှေ့တန်းတင်နေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမျိုးကနက်ရှိုင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူး။တွေ့တုန်းခဏမှာသာဟေးလားဝါးလားဆက်ဆံတတ်တဲ့ကိုယ်ပေါင်းစိတ်ခွာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမျိုးပဲ ဖြစ်သွားမှာပါ။
၂။ အကူအညီလိုအပ်မှ အပေါင်းအသင်းတွေကို သတိရလေ့ရှိတာလား
ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာတော့ ဘယ်သူ့ကိုမှ မဆက်သွယ်ပဲနဲ့ ကိုယ်အကူအညီလိုခါမှ ဟိုလူ့လှမ်းခေါ် ဒီလူ့ဖုန်းလှမ်းဆက် လုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်တော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးက ရေရှည်မခံနိုင်ပါဘူး။ ကိုယ်က သူများကို လိုသုံးအနေနဲ့ သဘောထားရင် သူတို့ကလည်း ကိုယ့်ကို လိုသုံးအနေနဲ့ပဲ ခေါင်းထဲထည့်ထားမယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
၃။ ကိုယ်က ငွေရေးကြေးရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် တစ်ပြားကနှစ်ပြား ခွာတတ်တဲ့လူလား
ပင်ကိုယ်ဗီဇအရ ငွေကြေးသုံးစွဲတဲ့နေရာမှာ ကျစ်လစ်တဲ့သူဖြစ်နေတာက ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေရဲ့ အမြင်မှာတော့ ကိုယ်က ငွေကြေးတွက်ကပ်တတ်တဲ့သူဖြစ်နေပြီလား? ဒါမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အဖွဲ့လိုက် အပြင်တွေ ဘာတွေ မသွားခင်ကတည်းက ကိုယ်သုံးစွဲမယ့် ငွေပမာဏကို သူတို့သိအောင် ပြောပြထားပါ။ဒါကိုမှ သူငယ်ချင်းတွေက ဈေးကြီးတဲ့နေရာပဲ သွားမယ်လို့ရွေးချယ်ရင်တော့ ကိုယ်တတ်နိုင်၊သုံးနိုင်တဲ့ ငွေပမာဏကိုကြည့်ပြီး လိုက်သင့်၊မလိုက်သင့် ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ရပါမယ်။
ဒီအချက်လေးတွေကတော့ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲမှာ အဖြစ်များတဲ့ အချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ ကိုယ့်စိတ်ထဲမက မရည်ရွယ်လိုက်ပေမယ့် တစ်ဖက်သားက လိုရာဆွဲတွေးပြီး ဒေါသတွေထွက်လို့ ပြတ်တောက်သွားတဲ့ ဆက်ဆံရေးတွေလဲ ရှိတတ်ပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဘဝမှာ သူငယ်ချင်းကောင်း ၊မိတ်ဆွေကောင်းဆိုတာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာမို့ Heart to Heart ပေါင်းနိုင်တဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်တွေ ရနိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါတယ်။
Previous Previous post: အသက် (၂၀) ကျော်အရွယ်နဲ့ မီလျံနာဖြစ်နေတဲ့ အနုပညာရှင်များ
Next Next post: Milky way Galaxy ရဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ပုံစံကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခွင့်ရမှာလား
မြန်မာပြည်မှာ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝအတွက် လွတ်လပ်ခွင့်ကို ဦးဦးဖျားဖျား ချိုးဖောက်နေကြသူတွေက သူတို့ရဲ့ မိဘတွေကိုယ်တိုင်ပဲ ဖြစ်နေတတ်ကြပါတယ်။ Post Views: 2,735